शुभ रहोस् तीज::Online News Portal from State No. 4
शुभ रहोस् तीज
हिन्दु धर्ममा भनिएको छ,जहाँ नारीको सम्मान गरिन्छ, त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ । आधुनिक समाजमा यो मान्यता लागु भएको छ कि छैन, यो फरक विषय हो तर सनातन धर्मावलम्बीहरुले मातृशक्तिलाई सधैँ केन्द्रमा राख्दै भने आएकै छन् । दशैमा दुर्गा सप्तसतिको पूजा हुँदा या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरुपेण संस्थिताभन्दै नारीशक्तिको पूजन गरिएको छ । श्राद्ध गर्दा पनि आमातर्फका चार पुस्तालाई तर्पण दिएर त्यही शक्तिप्रति आस्था राखिन्छ । हिन्दुहरुका आराध्यदेव शिवजीलाई आद्यशक्ति मात्रै नभएर नारीशक्तिसँग पनि जोडिन्छ । हो, नारीहरुले उनै शिवजीको पूजा गर्दैछन् । भाद्र शुक्ल तृतीयामा शिवजीको पूजा गर्छन् । अर्धनारीश्वरको रुपमा पूजिने उनै शिवजीको निराहार ब्रत बसी मनाइने यो पर्वलाई चलनचल्तीको भाषामा तीज भनिन्छ । यतिबेला गाउँदेखि सहरसम्म तीजको रमझम चलेको छ । तीज वास्तवमा नारीहरुको पर्व हो । नेपाली समाजमा माइतीको काखमा बसी आफ्नो पीर व्यथा व्यक्त गरिने पर्वको रुपमा पनि यसलाई चिनिन्छ ।
ईश्वरभक्तिसँगै नारी स्वतन्त्रताको वकालत पनि गर्छ यो पर्वले । नारी स्वतन्त्रता र शक्तिको वकालत गर्ने यो पर्वृले अहिले भने मौलिकता हराएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यथार्थमा पनि यस्तै देखिन्छ । नारीशक्तिको पर्वमा विकृति कहाँबाट भित्रियो भन्ने बहसको विषय हो । आधुनिकतासँगै तीज मनाउने स्वरुप फेरिन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? खानपान कस्तो हुनुपथ्र्यो ? यी यावत विषयहरुको पक्ष र विपक्षमा स्वरुहरु गुञ्जिएका छन् । तीजकै नाममा हाम्रो समाज र खासगरी नारीहरु पनि दुई ध्रुुवमा विभक्त भएका छन् । तीज भड्किलो भयो भन्दै आवाज उठाउने नारीहरुको सम्मानगर्दै प्रशासनले नै भड्किलो रुपले तीज नमनाउन उर्दी जारी गरेको छ । यो उर्दीलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि धावा बोलेको भन्दै केही नारीहरुले विमति जनाएर विरोध गरेका छन् । विरोध र समर्थनको बीचमा तीज आएको छ । एक महिनाअघिदेखि नै सुरु भएको दरखाने कार्यक्रम आज टुंगिँदैछ । छोरीचेलीहरु माइतीको घरमा आएका छन् । तीज मंगलमय होस्, तीजले नारीशक्ति र अधिकारको पक्षमा आवाज बुलन्छ गरोस् ।यसो भनिरहँदा तीजको मौलिक पक्ष पनि सम्झनै पर्ने हुन्छ । तीज सांस्कृतिक पर्व हो ।
यसको सांस्कृतिक पर्वलाई अवमूल्यन गरिनुहुँदैन । तीजको नामममा गहनाको प्रदर्शन, स्वतन्त्रताको नाममा खानपानदेखि लवाईसम्म स्वच्छन्दताले नारीकै अवमूल्यन हुन्छ । यो धनी र गरीब दुबैको पर्व हो । धनीहरु ठाँटिएर गहना प्रदर्शनगर्दै हिँड्दा अरु सामान्य नारीहरुको अवमूल्यन मात्र हुँदैन, यसको साँस्कृतिक महत्व घट्न पुग्छ । सधैँ विरहका गीत गाउनुपर्छ भन्ने छैन तर आधुनिकताको नाममा पाश्चात्य र आयातित गीत संगीतमा रमाउँदै मनाइने तीज र खाइने खानाले शोभा भने पटक्कै दिँदैन । अत ः तीज तीजजस्तै रहोस्, यसले नारी अधिकारको पक्षमा वकालत गरोस् अनि तीजको साँस्कृतिक महत्व पनि नघटोस् भन्नेतर्फ हामीसबैले ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । यो स्वास्नीमान्छे भएर हाँस्न हुन्न भन्ने भानभक्तकालीन जमाना होइन, नारीहरुले पनि पुरुषजस्तै मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्छ । तीजको नाममा अनुशासनको पाठ सिकाउने काम कतैबाट नहोस् बरु यसको सांस्कृतिक पक्षबारे भने सबैले ध्यान दिऊँ । तीज सबैको शुभ होस् ।